ARA-DALÀNA NY TORO-HEVITRA MAIMAIM-POANA AMIN'NY ATERINETO MANODIDINA NY FAMANTARANANDRO
ARA-DALÀNA NY TORO-HEVITRA MAIMAIM-POANA AMIN’NY ATERINETO MANODIDINA NY FAMANTARANANDRO
Raha ny tena izy, maro ireo lalàna ireo habaka izay afaka mampiasa ny karama amin’ny asa
Dia manolotra fanampiana ara-dalàna eo amin’ny sehatra matihanina ao an-tserasera ny fomba tsy misy tsy ho lany. Ny ara-dalàna vavahadin-tserasera dia manome fahafahana mba handray soa avy amin’ny torohevitra maimaim-poana ny mpahay lalàna za-draharaha amin’ny fotoana mety andro.Tsy afaka miantehitra amin’ny foto-drafitrasa sy ny drafitra.
Amin’izao fotoana izao, ny Internet, dia zava-dehibe ny marika manokana ny fiainana ho an’ny olona maro.
Ny solosaina ahafahana mamaha amim-pahombiazana ireo olana maro
Ohatra, lavitra torohevitra araka ny lalàna milalao ny anjara asa manan-danja, satria efa maro ny olana ary lasa fomba mba hisorohana ny fampandrosoana ny tsy ilaina ny ady. Afaka hifandray iray za-draharaha ny mpisolovava an-tserasera mba hahazo tsipiriany hamaly ny fanontaniana rehetra.
Miaraka izany ianao, dia afaka mijanona ao an-trano na any amin’ny birao
Tsy mila fanovana manokana drafitra mba hanazavana ny vaovao momba ny tandrify ny asa. Fifandraisana amin’ny mpisolovava dia nentina nivoaka soa aman-tsara, ary lavitra, amin’ny antoka ny fiainana manokana
Orinasa Mpisolovava ao Bangladesh